Semalt - Hints On How To Protect Your Android Gadget From Malware Attacks
Kushandisa imwe gadget yeAroid inotapukirwa nemarware uye utachiona zvinogona kunge zvakanyanyisa. Malware inobatsira kuderedza utsi hweIndaneti maitiro mushure mokunge uchitonga. Maererano neII nyanzvi, madivaysi eAroid anoshandiswa uye anotambura nekutapukirwa neTransfer virus nyore nyore - gafas ray-ban erika. Vanotsvaga uye vanopikisa vanoshandisa zvakashandiswa nevashandisi veAroid kuburikidza nekuvatumira zvikanganiso zvakashata nemarware nekutyisidzira.
Vashanduri veIndaneti vanonyanya kukoshesa kuchengetedza gadget kupfuura chero chimwe chinhu. Pari zvino, kuti uite kuti vatengi vafarire uye vanobatana, iwe unofanirwa kuvapa nekuchengeteka uye kuvavimbisa kuti zvikwangwani zvavo zvakachengeteka pafoni yako. Kufanana nezvimwe zvigadzirwa, Android inowanikwa nemugwagwa wayo unovhara spammers kubva kutumira emajeri asina kukodzera uye hukama kune device yako.
Ivan Konovalov, Mutungamiri Wekubudirira Kwemutengi we Semalt , anotsanangura mubhuku rekuti ungabvisa sei utachiona kubva pane gadget yako Android.
Iwe uri muridzi wefoni yeAndaneti inokonzerwa neTransfer virus nedzimwe malware here? Usanetseka zvakare. Kutsigira kwako paIndaneti kunotanga newe. Zvinonyangadza shanduro uye software zvinotora utongi hwefoni yako yeAsia mushure mekunge iwe wakagadzirirwa pangozi. Iva nehanya paunotarisa nekukandira zvifananidzo nemavhidhiyo kuti urege kuisa malware.
Kunze kwokuva vakangwarira, mamwe maitiro akaiswa panzvimbo yekuchengetedza vashandisi veIndaneti kubva mukurwiswa kweTrans attack..Mazano anotevera achakuchengetedza uye anobatsira kudzivirira Android yako kubva pakutapukirwa.
Kuisa OS Updates Pakarepo
Nhamba huru yevashandisi veIndaneti inotadza kukanganwa OS updates chero nguva iyo update ichioneka pachikona. Vashandi veIndonesia vanokundikana kunzwisisa kuti OS updates inouya neheuristic features uye mamwe mamiririro anobatsira kuchengeta kuchengetedzwa kwavo kweAvhangeri mukutarisa. Sezvo uri muIndaneti, funga kuisa OS updates pakarepo pasina kunetseka kudzivisa hutachiona nekurwiswa kwemarware.
Kushandisa Inhoroondo dzeVanhu Pamusoro peInternet Internet
Nhamba yakawanda yevashandisi veIndaneti inowanzosangana nekurwiswa kwemalware nekuda kwekushandiswa kweWIFI yevanhu vose. Kushandisa webhusaiti yevoruzhinji nemakambani ako ega ega kunoita kuti iwe unotambudzirwa neHIV virus inokurwiswa sekuti vatambudzi vanogona nyore kubvisa nzira dzenyu dzekukurukurirana. Usazadza ruzivo rwakavanzika pane maakaunti ako kana uchishandisa WIFI yevanhu vose.
Kuisa Mobile Security Apps
Kuisa purogiramu yekuchengetedza premium kunobatsira kuchengetedza smartphone yako kubva pakurwiswa nevanotyisa. Premium security apps dzinouya nemamwe maitiro anobvumira muIndaneti kutarisa kuongorora uye malware kubvisa mabasa
Kutarisira ma smartphone yako neshoko rinopa huckers nguva dzakanyanya paunenge uchiedza kuwana gadget yako yeAroid pasina kubvumirana kwako. Chengeta foni yako neshoko rakasimba kuti udzivirire mafaira ako ekuregererwa kubva kune utachiona neHitrovings and malware.
Chido chekuverenga zvibvumirano zvakanyatsogadziriswa usati waisa mapurogiramu pa Android yako haigoni kuiswa zvakanaka. Zvakakosha kuti urege kushandura upfumi hwose hunobva mumichina isingazivikanwi kuti urege kuisa mapurogiramu angakanganisa kuchengeteka kwako. Ita shanduro yehutachiona yakagadzirisa kuti uone uye kubvisa Trojan virusi uye zvimwe zvinonyangadza kubva kune Android yako zvachose. Android kuchengeteka kunotanga newe. Nguva dzose dzivisa kubatanidza zvigadziriswa uye hukama kubva kune zvisingazivikanwi paunenge uchishandisa WIFI yevanhu kuti usasvibiswa nevanokuvadza. Kuenda kwepamuzi Apps uye software nguva dzose inokurudzirwa nekuda kwekuwanikwa kwezvikwata zvekutsvaga uye nheyo muhwaro hwekushandura kwepachena.